परिक्रमा र सोनाम- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
भारतमा पाश्‍चात्य संगीत, विशेषगरी रक म्युजिकको ‘ट्रेन्ड सेटर्स’ ‘ब्यान्ड परिक्रमा’ का संस्थापक गितारिस्ट सोनाम शेर्पाको गत शुक्रबार निधन भएको छ ।
फाल्गुन ९, २०७६ हिमेश
नब्बेतिर नयाँदिल्लीलाई आधार मानेर एउटा रक ब्यान्ड स्थापित भएको थियो, जसलाई भारतीय वेस्टर्न म्युजिकको सबैभन्दा ठूलो मोड मानिन्छ । र, यो ब्यान्ड हो, परिक्रमा । जति बेला इन्टरनेटको सुविधा थिएन, गीतहरू क्यासेट चक्काको मद्दतले सुन्नुपर्थ्यो, त्यही बेला यो ब्यान्डले भारतमा तहल्का मच्चाएको थियो । परिक्रमा भनेपछि हाम्रोतिर पनि उत्तिकै प्रशंसक थिए । यस पछाडि एउटा ठूलो कारण थियो, यस ब्यान्डका संस्थापक गितारिस्ट सोनाम शेर्पा ।
सोनाम हुन्, कालिङपोङका । पश्चिम बंगालको यो सानो सहरमा हुर्के बढेकाले संगीतलाई नै आफ्नो पेसा बनाउने आँट त्यही बेला कसरी गर्न सक्थे र ? सोनामले भने आँट गरे । बाँकी इतिहास भयो नै । यिनै सोनामको गत साता निधन भएको छ र पूरा भारतीय संगीत उद्योग स्तब्ध छ । उनी ४८ वर्ष मात्र बाँचे । उनी म्यासिभ कार्डियो एरेस्टको शिकार बनेका थिए । हाम्रोतिर पनि उनको निधनको समाचारले उनी र परिक्रमा ब्यान्डका प्रशंसकलाई पत्याइनसक्नु भएको छ ।
अरू धेरै ब्यान्डको तुलनामा परिक्रमा फरक छ किनभने यो ब्यान्डले कहिले पनि आफ्नो एल्बम रिलिज गरेन । कारण ? ब्यान्डको तर्क थियो, संगीत सबैका लागि निःशुल्क हुनुपर्छ । त्यसैले ब्यान्डका गीत मज्जाले डाउनलोड गर्न पाइन्छ र अहिलेसम्म दसौं लाखको संख्यामा ब्यान्डका गीत डाउनलोड पनि भइसकेका छन् । सम्भवतः ‘बट इट रेइन्ड’ र ‘आई बिलिभ’ यो ब्यान्डका सबैभन्दा चर्चित र लोकप्रिय गीत हुन् । तपाईं पनि सोनामको सम्झनामा यी गीत सुन्न सक्नु हुन्छ ।
संगीतसम्बन्धी म्यागजिन रोलिङ स्टोन्सले पनि सन् १९९६ को यो गीतलाई भारतको सबैभन्दा उत्कृष्ट रक गीतमध्ये एक भनेको छ । ब्यान्डको पहिलो गीत थियो, ‘जेरोक्स’ । यसलाई भारतीय रक संगीतको वास्तविक अनुहार भनिन्छ । सुविर र नितिन मलिक नयाँदिल्लीका दुई दाजुभाइ हुन् । नितिन लिड भोकलिस्ट भए । सोनामसँग यस ब्यान्डका अरू सदस्य हुन्, सौरभ चौधरी, सुविर मलिक, गौरव बलानी र सिर्जन महाजन । यसमध्ये मलिक दाजुभाइ नै यस ब्यान्डका फ्रन्ट म्यान हुन् ।
तर, उनीहरूजत्तिकै महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्, सोनाम । त्यसैले त उनलाई ब्यान्डको मेरुदण्ड भनिन्छ । उनको गितार बजाउने विशिष्ट आफ्नै कला पाइन्छ र यो नै उनको सबैभन्दा ठूलो पक्ष हो । फेरि यसलाई शब्दमा बयान गर्न त सकिन्न, यसका लागि उनका कला नै सुन्नुपर्ने हुन्छ । ब्यान्डले आफ्ना गीतमा तबलाजस्ता परम्परागत पूर्वेली बाजासँग फ्युजन गर्ने गरेका छन् । अनि ब्यान्ड आफैं जिमी हेनड्रिक्स, पिन्क फ्लोयड र डोर्सजस्ता ब्यान्डबाट प्रभावित छन् ।
सोनाम र परिक्रमा आफैं भने नयाँ पुस्ताका धेरैभन्दा धेरै ब्यान्डका लागि प्रेरणा रह्यो । नयाँदिल्लीमा पश्चिमेली संगीत सिक्ने एउटा प्रसिद्ध पाठशाला रहेको छ र त्यसको नाम हो, परिक्रमा स्कुल अफ म्युजिक । यसका संस्थापक अरू कोही होइनन्, सोनाम नै हुन् र यो पूरा नयाँदिल्लीमा यस्तोखाले पहिलो स्कुल हो । कालिङपोङ आफैं नाम चलेका स्कुलहरूका लागि प्रसिद्ध छ र यीमध्ये धेरै ब्रिटिस शासनकै बेला स्थापना भएका हुन् ।
त्यसमध्ये एउटा प्रसिद्ध सेन्ट अगस्टाइनमा सोनामले सुरुआती शिक्षा लिए र पछि थप अध्ययनका लागि नयाँदिल्ली गए । पछि उनले त्यही सहरलाई आफ्नो कर्मथलो बनाए । ‘रक अन’ सिनेमा प्रदर्शन हुने बेला फारहान अख्तरले सोनामसँग मिलेर टुर पनि गरेका थिए । उनको निधनमा अख्तरले ट्वीट गरेका छन्, ‘सोनाम ट्रू रक स्टार हुन् ।’ गितारिस्ट सौरभले भने जस्तै ब्यान्डका अरू सदस्य सोनामभन्दा कान्छा थिए, त्यसैले उनीबाट सिक्दै हुर्के ।
सोनामको सबैभन्दा बढी प्रभाव उनको जन्मथलो कालिङपोङमै रह्यो । उनको प्रभाव र सफलताका कारण उनलाई पछ्याएर संगीतलाई आफ्नो करियर बनाउन धेरै युवा कालिङपोङबाट निस्के । यसमध्ये एक त विपुल क्षत्री नै हुन् । विपुल क्षत्री एन्ड ट्राभलिङ ब्यान्डका लिड गितारिस्ट प्रनय गुरुङले ठीकै भनेका छन्, ‘हामी सबैका लागि सोनाम आदर्श हुन् ।’ यी लेजेन्डरी गितारिस्ट सोनाम हाम्रो पनि मनमा रहनेछ । उनलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।
प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ १२:२८
'जसरी खेले पनि १ करोड सकिने रहेछ, हारे पनि झरे पनि । लिग खेल्‍नै पर्ने हुन्छ, चुनौती लिएर उठ्छ भनेर टिम आँटिएको हो ।'
फाल्गुन ९, २०७६ राजु घिसिङ
घरेलु फुटबलकै सर्वाधिक प्रतिष्ठित सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको नयाँ च्याम्पियन हो मछिन्द्र क्लब । उसले अन्तिम खेलमा आर्मीलाई १–० ले हराएर शनिबार इतिहास कोरेको हो । उपाधि जित्न मछिन्द्रलाई त्यो खेलमा जितको विकल्प थिएन भने आर्मीलाई बराबरी वा विजयी दुवै नतिजा ट्रफी चुम्न पर्याप्त हुन्थ्यो । तर, बाजी मार्‍यो मछिन्द्रले । राजधानीको ४७ वर्ष पुरानो यो क्लबको सफलताका ५ आधार :
चर्चित खेलाडीहरूको आगमन
लिगको दौरान थ्रीस्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसीले भनेका थिए, ‘नेपालमा कुन खेलाडीलाई स्टार मान्ने, कसलाई नमान्ने ? ठूलो लगानी गरेर खेलाडीलाई स्टार भन्ने खालको खेल कहाँ छ र ?’ हुन पनि नेपाली फुटबलको अवस्था त्यस्तै छ । खेलाडीहरूलाई स्टारभन्दा पनि नाम चलेका भन्नुपर्ने अवस्था छ किनभने नामअनुसारको खेल मैदानमा विरलै देख्न पाइन्छ ।
यस्तै परिस्थितिमा पनि मछिन्द्रले चर्चित खेलाडीहरूलाई अनुबन्ध गर्‍यो ठीक लिगअघि । जति बेला कीर्तिमान आठपल्टको ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मनाङ–मर्स्याङ्दीमा उसका पुराना खेलाडीहरूले ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका थिए । उनीहरूलाई क्लब व्यवस्थापनप्रति चित्त बुझेन । ठीक यसै बेला खेलाडीहरूलाई मछिन्द्रले आकर्षक पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गरिरहेको थियो ।
विशाल श्रेष्ठ, विशाल राई बी, सुजल श्रेष्ठ, विराज महर्जन, दीपक राई, हेमन गुरुङ, एडेलाजा सोमिडे मनाङबाट मछिन्द्र पुगे । मनाङकै जर्सीमा एएफसी कप खेलेका देवेन्द्र तामाङ र अभिषेक रिजालले पनि मछिन्द्रलाई नै गन्तव्य बनाए । थ्रीस्टारले खर्चिलो टिम राख्ने हिम्मत गरेन र त्यसको फाइदा मछिन्द्रलाई नै भयो । रन्जिन धिमाल, विजय धिमाल, बुद्ध चेम्जोङ र पिटर सेगुनले पाटने क्लब छाडे । अनि बलियो बन्यो मछिन्द्र । योगेश गुरुङ, विशाल राई ए जस्ता अनुभवीसँगै युवा खेलाडीहरूलाई पनि ल्याइयो ।
सात वर्ष मनाङमा खेलेका मिडफिल्डर विशाल बी ले भने, ‘ऐतिहासिक क्लब मनाङमा जस्तै दबाब त भएन तर सबैले स्टार स्टार भनिरहेपछि मछिन्द्रमै पनि दबाब महसुस हुन थाल्यो । मछिन्द्रले जित्दा थप खुसी किन पनि लाग्यो भने जुन हामीले खेल्दाखेल्दै बीचमा बजारमा हल्ला जति खर्च गरे पनि हुँदैन रहेछ भन्ने थियो । हाम्रो यो सफलताले भविष्यमा अरू खेलाडीलाई पनि राम्रो हुन्छ ।’ लिगको अन्तिम खेलमा आर्मीलाई १–० ले हराएर च्याम्पियन भएपछि उनीसहित गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ, सुजल र फरवार्ड दीपक राईले ए डिभिजन लिगको उपाधिमा ह्याट्रिक गरे । उनीहरूले अघिल्ला दुई उपाधि (२०७० र ०७५) मनाङबाट जितेका थिए ।
व्यक्तिगत कौशल र उमेर समूह तथा सिनियर राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका खेलाडीहरू लिएर यसपालि मछिन्द्रको टिम जसरी बन्यो, त्यसले उसलाई प्रतियोगिताअघि नै उपाधिको मुख्य दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । लिगमा तेस्रो चरणदेखि उसले अन्त्यतिर गोल गर्ने, पछाडि परेको अवस्था उल्ट्याउने, दबाबमै पनि अनुकूल नतिजा निकाल्ने गर्दै च्याम्पियन बन्ने छनक पनि देखाउन थाल्यो । अन्त्यमा आएर जित्नैपर्ने खेल जितेपछि मछिन्द्रले १६ औं विजेताका रूपमा इतिहास बनाएको हो ।
मछिन्द्रले नाम चलेका स्वदेशी खेलाडी त भेला पारेका थिए नै, विदेशी खेलाडी पनि राम्रै स्तरका अनुबन्ध गर्‍यो । नाइजेरिन डिफेन्डर पिटर सेगुन, फरवार्ड एडेलाजा सोमिडे र क्यामरुनी मिडफिल्डर आन्द्रेस निआलाई भित्र्यायो । शारीरिक रूपमा बलिया यी तीनै खेलाडीले लिगमा राम्रै प्रभाव देखाए । देवेन्द्र, विशाल बीसँगै पिटर र निआ २–२ पल्ट म्यान अफ द म्याच भए । रञ्जित र दीपकसँगै सोमिडे एकपल्ट म्यान अफ द म्याच चुनिए ।
मछिन्द्रले एकमात्र हार सातौं चरणमा हिमालयन शेर्पाविरुद्ध २–० को बेहोर्‍यो । त्यसलाई लिएर पिटरको आलोचना भएको थियो । तर, अरू खेलमा उनले त्यस्तो नराम्रो प्रदर्शन गरेनन् । पिटर र सोमिडे नेपाली फुटबलका अनुभवी खेलाडी हुन् र त्यो अनुभवलाई उनीहरूले मछिन्द्रका लागि उपयोग गरे । निआले गत वर्ष मोफसलका प्रतियोगिताहरू ‘दाउफिन्स’ नाम दिइएको अफ्रिकी खेलाडीहरूको टिमबाट खेलेका थिए । पूरा लिगमै छाएका उनी निर्णायक खेलमा आर्मीविरुद्ध म्यान अफ द
म्याच चुनिएका थिए । विदेशी खेलाडीको प्रदर्शनलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने अरू क्लब मछिन्द्रभन्दा निकै पछाडि देखिए ।
खेलाडी बुझेका प्रशिक्षक
प्रवेश कटुवालले कुनै बेला मछिन्द्रका यी खेलाडीहरूसँगै खेलेका थिए र उनीहरूलाई प्रशिक्षकका रूपमा सम्हालेका पनि थिए । त्यसैले हुन सक्छ, मछिन्द्रले खेलाडीहरूलाई बुझेका र नजिक रहेका प्रवेशलाई नै प्रशिक्षक बनायो । तीन वर्षअघि एएफसी ‘ए’ लाइसेन्स कोचिङ कोर्स गरेका उनले सैनिक युथ क्लबलाई प्रदेश १ च्याम्पियन बनाएका थिए भने झापा फुटबल क्लबलाई गत वर्ष राजधानीको सी डिभिजनमा छनोट गराएका थिए ।
झापा ११ फुटबल क्लबको सिनियर र युवा टिमका प्रशिक्षक पनि हुन् प्रवेश । मछिन्द्रका अधिकांश खेलाडीले यसअघि नै प्रवेश प्रशिक्षक रहेको टिमबाट खेलिसकेका थिए । उनले लिगमा मछिन्द्रका २० खेलाडी उपयोग गरे । त्यसमध्ये ५ खेलाडी झापाका हुन् भने ११ खेलाडी पूर्वका । देवेन्द्र, विशाल बी, योगेश, विशाल ए, विमान राई झापाका हुन् भने दीपक, विजय, रञ्जित, सूर्य अधिकारी मोरङका तथा सुजल र बुद्ध धनकुटाका । फुटबल खेलाडी उत्पादनको उर्वर भूमि प्रदेश १ हो । त्यसैले पनि राजधानीको क्लबले पूर्वकै खेलाडी र प्रशिक्षक रोजेको हुन सक्छ ।
थ्रीस्टारबाट २०६९ मा खेलाडीका रूपमा र यसपालि मछिन्द्रबाट प्रशिक्षकका रूपमा ए डिभिजन लिग च्याम्पियन भएका प्रवेशले भने, ‘धेरै खेलाडीसँग पहिला सँगै खेलेको थिएँ, प्रशिक्षकका रूपमा पनि खेलाएको थिएँ । उनीहरू मेरा लागि मैदानमा खेलाडी हुन् भने बाहिर साथी । त्यसैले स्टार खेलाडीलाई सम्हाल्न गाह्रो भएन । व्यवस्थापनले पनि टिमका लागि आवश्यक हरेक कुरामा साथ दियो ।’ शीर्ष डिभिजनको उनको यो नै पहिलो लिग हो प्रशिक्षकका रूपमा । उनले ४–३–३ को आक्रामक शैलीमा लिग सुरु गरेका थिए । हेमन गुरुङ अस्ट्रेलिया गएपछि र मनाङसँगको
तनावमा तीन खेलाडी निलम्बनमा परेपछि ३–५–२ र ४–४–२ को संरचना पनि अपनाए । उनले अभिषेक माल्दिभ्सको बी डिभिजन खेल्न गएपछि फरवार्डको खोजीमा नाइट क्लब काण्डबाट फर्किएका विमल घर्तीमगरलाई एक खेलका लागि पनि ल्याए ।
व्यक्तिगत कौशल र पोजिसनका आधारमा बलियो देखिए पनि मछिन्द्रको सेन्टर फरवार्ड खासै प्रभावशाली भएन । सुजल, विराज, दीपक, रेजिनको चोटले पनि मछिन्द्रलाई पीडा दियो । तर, ‘डेड बल’ मा राम्रो गर्‍यो । विशेषगरी रञ्जित धिमालले प्रहार गर्ने फ्रि–किक, कर्नर विपक्षीका लागि निकै खतरनाक बन्यो ।
२०७५ सालमा अन्तिमबाट दोस्रो हुँदा यसपालि १ अंक गुमाउनुपरेको मछिन्द्रले १३ खेलमा १० जित, २ बराबरी र १ हारको नतिजा निकाल्ने क्रममा २५ गोल गरेर ८ गोल बेहोर्‍यो । उसले १ गोल विपक्षीको आत्मघाती पायो भने २४ गोल ११ खेलाडीले गरे । दीपक, सोमिडे र विशाल बीले ४–४ गोल गरे भने देवेन्द्रले ३ । रञ्जित र रेजिनले २–२ गोल । योगेश, पिटर सेगुन, सुजल, निआ र विशाल ए ले १–१ गोल गरे । त्यसैले मछिन्द्रलाई ‘फ्रि–स्कोरिङ’ टिम भन्न मिल्छ । मछिन्द्रले १८ गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो । गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले ७ खेलमा ‘क्लिन सिट’ राखे ।
मछिन्द्र क्लबका अध्यक्ष प्रवोध वीरसिं कंसाकार यसपालि चुनौती मोलेरै ठूलो टिम बनाएको बताउँछन् । ‘हामीले जोखिम नै लिएको हो, पैसा भएर होइन,’ उनले भने, ‘जसरी खेले पनि १ करोड सकिने रहेछ, हारे पनि झरे पनि । लिग खेल्नै पर्ने हुन्छ, चुनौती लिए उठ्छ भनेर भाइहरू तयार भएपछि टिम आँटिएको हो । यो सबै फुटबलको प्यासनका लागि गरिएको हो ।’
उनका अनुसार क्लबले यो ए डिभिजन लिगमै केन्द्रित भएर १ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो, जुन गत वर्षभन्दा दोब्बर हो । ‘फुटबलमा यताउति थुप्रै खर्च हुने रहेछ, १ करोड ७५ लाखसम्म पुग्ला,’ कंसकारले भने । मोफसलमा हुने नकआउट प्रतियोगिताबाट राम्रै आम्दानी आशा गरेको क्लबले प्रायोजकहरू सानमिगेल, पेपे पिज्जा, नेपा टप, गुडविल फाइनान्स, भिजन सफारीबाट करिब ३० लाख पाएको बताइन्छ ।
मछिन्द्रको मुख्य स्रोत भने केलटोल क्षेत्रको बजार व्यवस्थापनबाट संकलन गरिने रकम नै हो । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले तयारी खर्च २० लाख र काठमाडौं महानगरले १० लाख दिन्छन् । लिग च्याम्पियनको पुरस्कार ५० लाख पायो । त्यसैले मछिन्द्रलाई फुटबल खेलेरै लगानी उठाउन भने मुस्किल छ । खेलाडीको अनुबन्ध चैतसम्मलाई छ । मनाङ र थ्रीस्टारबाट चर्चित खेलाडीहरूलाई भित्र्याएर बलियो बन्ने क्रममा मछिन्द्रले एउटै खेलाडीलाई मासिक १ लाखसम्मै दियो । ए डिभिजन लिगमा नयाँ च्याम्पियन बनाएर ती खेलाडीहरूले क्लबप्रति न्याय नै गरे । अब वैशाखदेखि हुने भनिएको राष्ट्रिय लिगमा मछिन्द्रको टिमको स्वरूप कस्तो हुन्छ, च्याम्पियन टिमलाई हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ १२:२५